Luulyo | 2008 | WEEJIDOW
Archive for Luulyo, 2008
Luulyo 31, 2008
Afhayeenka oo saxaafada u warmaye ayaa waxa shaagay in aad ugu farax sanyahay dadaalka ay wado Golaha Wasiirada xukuumada Nuur cade ,taasi ay ku sifeenayaan Df ragii hore ugu tirsanaan jiray hogaamiyo kooxeedyadii dhibaatda ku heen jiray shacabka somaaliyeed
Sidoo kale waxa uu afhayeenka sooo dhaweey qorsha nabad raadinta ah oo uu wao Ra’isul wasaaro Nuur cade .
Sikastaba waxa labadaan bari soo badanayo masuuliyiin iyo shacabka somaliyeed oo amaan iyo tagaaro u diraayo Xukuumada nuur cade Xili ay xukmadiisa ay Xilka ka qaatay Maxamed dhere kaasi oo la dhihi karo in uu ahaa mid dhibaato ba’an ku haye shacabka somaaliyeed ,iyadoo badanaa Dadka barakacayaasha ay shaygeen in Muqdisho uu ka bursade Maxamed dheere ay haatan aad ugu faraxsan yihiin xilkii laga qaaday ayna dib ugu soo laaban doonaan Gudahda Caasimada Somaalia ee Muqdisho.
Qaar ka mid ah dadka Barakacayasha ah ee ku sugan magaalada Muqdisho oo ka cabanaya dagaalada ka dhacay magaalada
Dadka degan dugsigii hore ee farsamada gacanta ayaa waxa ay ka cabanaya dhibaatooyin ay la kulmaan xiliyada ay dagaalo ka dhacaan isgoyska KM4 ee magaalada Muqdisho.
Dadkaan oo haatan bara kac ku ah dugsigii hore Farsamada Gacanta ee Bolo Tikniko ee degmada Waaberi ayaa sheegaya in ay dhibaatooyin fara badan ay ku qabaan xiliyada dagalada ay ka dhacaan magalada Muqdisho gaar ahaan isgooyska KM4 halkaasi oo ay inta badan ka dhacaan dagaalo u dhaxeeya xoogaga hubaysan ee ka soo horjeeda dowlada KMG iyo ciidamada Dowlada iyo Kuwa Ethiopia oo is garabsanaya.
Gudoomiyaha dadkaasi barakacayaasha ay ayaa sheegay in ay ku dhacaan dhibaatooyinka ugu badan xiliyada ay dagaaladu socdaan waxana uu carabka ku dhiftay in ay taasi u sii dheertahay madaafiic halkaasi lagu garaco oo ay ku baaba’aan dadka barakaca ku ah halkaasi kuwaasi oo hooy u ah guryo ka samaysan baco iyo cooshado islamarkaana aan iska difaaci Karin rasaasta yar yar.
Ma’ahan markii ugu horaysay ee cabasho nuucani oo kale ay ka soo yeerto dadka ku barakacay gudaha magaalada Muqdisho kuwaasi noo sheegay in ay saamayn ku yeeshaan dagaalada mar waliba ka dhaca gudaha magaalada Muqdisho.
Axmed Cabdisalaan oo u ololeynaya in Xilka Gudoomiyaha Gobolka Banaadir loo magacaabo lahaa Nin ay isku heyb yihiin
Ra’iisul Wasaare Kuxigeenka ahna Wasiirka Warfaafinta dhalinyarada iyo Sportiga Axmed Cabdisalaan Xaaji Aadan ayaa dadaal dheer ugu jira sidii Xilka Gobolka Banaadir iyo Duqa Magaalada loogu magacaabi lahaa Nin ay isku beel yihiin.
Axmed Cabdisalaan oo ah nin aad u fir fircoon wuxuu qeyb ku leeyahay ridista Maxamed Dheere oo ahaa Gudoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Magaalada Muqdisho, wuxuuna aad uga soo shaqeeyay sidii xilka loogaga qaadi lahaa, markii ay ereyo kul kulul saxaafada isku dhaafsadeen.
Warar ku dhow Mr Cabdisalaan ayaa sheegaya inuu u ololeynayo sidii xilalkaas loogu dhiibi lahaa Nin ay isku beel yihiin, kaasoo sanadihii la soo dhaafay ka soo dhex muuqday Siyaasada Gobolka Banaadir.
Isagoo saaxiib dhow la ah, isla markaana ka mid ah haatan Gudiga Xukuumada u saartay maamul u sameynta Gobolka Banaadir ayuu Axmed Cabdisalaan doonayaa in xilkaas loo magacaabo shaqsi ay isku heyb yihiin, waxaana damaca Axmed uu yahay mid aan sahlaneyn, isagoona wada dadaalo kala duwan oo uu ugu jiro arrintaas.
Maxamed Cumar Tootow, Gudoonadkii Shirkii Dib u Heshiisiinta Qaran, horayna Gudoomiye loogu doortay Golaha Deegaanka Gobolka Banaadir, xilligii Hogaamiye Kooxeedyadii ayuu doonayaa Axmed Cabdisalaan in xilkaas loo dhiibo.
Mr Tootow waxaa uu degan yahay Dalka Mareykanka, waxaana sida war igu soo gaartay uu haatan ku sugan yahay Dalka Isu taga Imaaraadka Carabta, kadib markii uu u yeeray Axmed Cabdisalaan oo ay isku heyb yihiin wuxuuna doonayaa in Ra’iisul Wasaaraha uu sanka ka geliyo in xilkii Maxamed Dheere loogu wareejiyo.
Marka laga soo tago musharaxnimada Maxamed Cumar Tootow ayaa waxaa wehliya musharax kale oo lagu magacaabo Siyaasiga C/raxmaan Shifti, oo ahaa Afhayeenkii Shirka Dib u Heshiisiinta Qaran, waxaana isagana dabada ka riixaya xubno uu ka soo jeeda Beesha Mudullood oo qaarkood Xildhibaano ah
Laakiin su’aasha isweydiinta mudan waxay tahay Madaxweynaha ma aqbali doono xil ka qaadista Maxamed Dheere, hadii uu ogolaadana ma cuntami kartaa Qorshaha Axmed Cabdisalaan uu ku damacsan yahay in xilka Gobolka Banaadir loo dhiibo nin ay isku beel yihiin.
Nin la dhashay Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaliya oo Kooxo Hubeysan ku dhaawaceen Duleedka Muqdisho.
Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dhaawac xun oo shalay gelinkii Kooxo Hubeysan ay u geysteen Nin la dhashay Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Maxamed Geeddi.
Wararka ayaa sheegaya in ninkan la dhashay Cali Maxamed Geeddi ay Kooxo Bastoolado ku hubeysan ku weerareen Deegaanka Ceelasha Biyaha xilli uu saarnaa Gaari uu watay.
Ninkan ayaa lagu magacaabaa Daahir Maxamed Geeddi, iyadoo la sheegayo in dhaawaca uu qabo ay tahay mid halis ah, waxaana haatan lagu soo waramayaa in dhaawaciisa la geeyay Cusbitaalka Keysaney.
Lama oga sababta ka dambeysa dhaawaca loo geystay ninkaas la dhashay Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Maxamed Geeddi oo xilka Ra’iisul Wasaarenimada isaga degay dhamaadkii sanadkii hore.
Qorshe Xilka looga qaadayo Taliyaha Ciidamada Booliska Soomaaliyed oo si xoogan uga socda Xafiiska Ra’iisul Wasaare Nuur Cadde
Iyadoo maalin ka hor uu xil ka qaadis ku sameeyay Ra’iisul Wasaare Nuur Cadde Gudoomiyihii Gobolka Banaadir iyo Duqa Muqdisho Maxamed Dheere, ayaa hadana waxaa soconaya qorshayaal ku aadan sidii Taliyaha Ciidamada Booliska Soomaaliyed Cabdi Qeybdiid looga qaadi lahaa xilkiisa.
Jen Cabdi Qeybdiid ayaa ka mid ah saddex ruux ee lagu eedeynayo in ay ka mas’uul yihiin dhibaatooyinka ka jira Magaalada Muqdisho, waxaana warar aan si rasmi ah loo shaacin ay sheegayaan in saacadaha soo socda ay Golaha Wasiirada cod u qaadayaan xil ka qaadistiisa.
Mas’uuliyiin diiday in magacyadooda la xigto ayaa sheegay in xukuumada ay wado dadaalo ay wax uga bedeleyso habka shaqo iyo maamul ee qeybaha kala duwan ee dowlada, kuwaasi oo mas’uuliyiinta maamuleysa ay mudooyin badan xilalkaasi hayeen, laguna eedeynayo in wax socodsiin waayeen.
Warar qaar ayaa sheegaya in qorshayaashan ay dabada ka riixayaan Wasiirada Arrimaha Gudaha iyo Gaashaandhiga oo soo eedeeyay Cabdi Qeybdiid, iyagoona ku baaqay in xilka ay ka qaadaan, iyadoo wali ay taagan tahay muranka ka dhashay xil ka qaadistii Maxamed Dheere maalin ka hor.
Laakiin isweydiintu waxay tahay hadii Cabdi Qeybdiid xilka laga qaado Maxaa xigi dooona, taas ayaa ah mid dadka dhinacyo kala duwan u fasirayaan, hadii saddexdii shaqsi ee lagu eedeynayay in ay ka mas’uul ahaayeen dhibaatooyinka Muqdisho labo ka mid ah xilalka laga qaaday shaqsiga Saddexaad sida laga yeelayo.
Jen. Darwiish Taliyaha Ciidamada Nabad Sugida waxaa lagu eedeynayaa inuu dad badan ay xirteen Ciidamadiisa, deetana lacago madax furasho ku sii daayeen dad aan waxba galabsan oo dambiyo aysan laheyn dusha ka saaray, Darwiish waa Jeneraalka gacanta midig ee Madaxweyne Yuusuf, ma sahlanaan doonto in si fudud xilka ay uga qaadaan Nuur Cadde iyo Axmed Cabdisalaan oo is baheystay.
Qarax lala beegsaday ciidamadii tababarka ku soo qaatay Itoobiya oo saaka ku faafay xaafado ka tirsan degmada Yaaqshiid ee magaalada Muqdisho
Ciidamo aad u fara badan oo ka tirsanaa kuwii milateriga DF ee Dhowaan ka soo laabtay tababar ay ku soo qaadanaayeen dalka Itoobiya ayaa saaka isku fidiyey qeybo ka mid ah wadada dheer ee warshadaha iyo xaafado ka mid ah degmada yaaqshiid ee magaalada Muqdisho.
Sida warku sheegayo ciidamadan oo ka soo baxay fariisimada ay ku leeyihiin warshadii hore ee baastada iyo Xeyle bariise ayaa lagu soo waramayaa iney soo gaareen illaa isgoyska Isbitaalkii hore ee Caraafaat, iyagoo ku faafay xaafada Tawakal ee degmada yaaqshoid oo ah xaafadaha dhinac woqooyi kaga beegan halkaasi ee ku aadan dhismaha Jaamacada Muqdisho.
Intii ay ciidamada halkaasi ku sugnaayueen ayaa la sheegay inuu qarax aad u weyn ka dhacay wadada jaayga ah ee u baxda dhinaca qabuuraha Barakaat ee duleedka magaalada Muqdisho, lamana oga illaa hadda qasaaraha uu qaraxaasi u geystay ciidamadii DF ee halkaasi ku sugnaa, waxaana la tilmaamay in ciidamadu ay qarax ka dib fureen rasaas aan la soo sheegin cid wax ku noqotay bacdamaa goobtaasi ay aheyd meel cidlo ah oo horeyba looga barakacay oo isla markaana ciidamada keligood ay ku sugnaayeen.
Warka ayaa intaa ku daraya in xaalada deegaankaasi ay hadda tahay mid caadi ah ka dib markii ay ciidamada DF ku soo laabteen fariisimadii ay markii hore ka tageen, mana jirin wax rashado ah oo halkaasi ka dhacay marka laga reebo qaraxaasi iyo rasaasta ka dambeysay oo illaa hadda aan la soo sheegin cid wax ku noqotay, waxaana deegaanadaasi ay ka mid yihiin goobaha ugu daran ee dagaalada ka socda magaalada Muqdisho ay aafeeyeen mudooyinkii ugu dambeeyey oo si aad ahna looga barakacay.
Muqdisho:Taliskii Ciidanka Booliska maamulka G/Sh/Hoose oo maanta laga xayuubiyey xilalkoodii
Muqdisho: Wareegto kasoo baxday Xafiiska Taliyaha Ciidanka Booliska DFKS Cabdi Xasan Cawaale (Qeybdiid)ayaa maanta lagu casilay taliyihii qeybta ciidanka booliska maamulka G/Sh/hoose Cali Adan Cali(Ganey) iyo ku xigeenkiisii Nuriye Cali Fara.
Wareegtadaan oo uu ku saxiixnaa Cabdi Qeybdiid isla markaana uu u aqriyrey saxaafada Afhayeenka ciidanka booliska DFKS C/llahi Xasan Bariise ayaa waxaa lagu sheegay in xilkoodii laga qaaday ragani kadib markii ay gudan waayeen waajibaadka xilalkoodii.
Saraakiisha ciidanka Booliska maamulka Sh/hoose ayaa waxaa lagu eedeey sida uu sheegay Afhayeenka ciidanka booliska mr Bariise hub sharci sharci daro ah iyo iyaga oo qortay ciidamo aaney Dowlada ka warqabin sida uu hadalka udhigay.
Sidoo kale wareetadaan maanta kasoo baxaday xafiiska taliyaha ciidanka booliska DFKS ayaa waxaa shaqadoodii loogaga eryey 3 sarkaal oo kale oo ka tirsanaa ciidamada Booliska DFKS kuwaas oo qaarkood horey usheegay in ay iska casileen xilalkodii.
Sadexdaasi nin ayaa waxaa ka mid ah taliyihii ciidanka Booliska Gobolka Banaadir qeybta Bari C/qaadir Beebe iyo labo sarkaal oo kale.
arintaan ayaa waxaa ay kusoo beegmeysaa xilli maalin ka hor uu Ra,isulwasaaraha XFKS uu xilkii ka qaaday Gudoomiyhihii Gobolka Banaadir ahaana Duqii magaalada Muqdisho Maxamed Cumar Xabeeb Maxamed Dheere.
Muqdisho: Taliska Ciidanka Booliiska Soomaaliyeed oo warbixin kasoo saaray ciidamada Dhawaan Ethiopia lagu soo tababaray
Muqdisho: Taliska ciidanka Booliska DFKS oo marki ugu horeeysay hadal kasoo saaray ciidamada dhawaan lagu soo tababaray dalka Ethiopia iyo ciidamada Booliska Dowlada oo sheegay in ay soo qabteen walxo maandooriye ah.
Taliska Ciidanka Booliska DFKS ayaa maanta ka hadlay marki ugu horeeysay ciidamada Booliska ee dhawaan lagu soo tababaray dalka Ethiopia ee haatan ku sugan magaalada Baydhabo.
Taliyaha Ciidanka Booliska DFKS Cabdi Xasan Cawaale Qeybdiid oo maanta la hadlay saxaafada ayaa sheegay in ciidamada Booliska ee dhaawaan lagu soo tababaray dalka Ethiopia ay imaan doonaan magaalada Muqdisho isla markaana ay ka mid noqon doonaan ciidamada Booliska ee haatan ku sugan magaalada Muqdisho.
Waxaa uu intaa raaciyey in in lasiin doono mushaaraad ku filan oo ay bixin doono sida uu hadalka udhigay DFKS.
Arintaan ayaa waxaa ay kusoo beegmeeysaa xilli dhawaan Barlamaanka KMG ee fadhigooda yahay magaalada Baydhabo ay ucodeeyeen in ciidamada Booliska ee dhawaan lagu soo tababaray dalka Ethiopia ay ka howlgalaan magaalada Baydhabo.
Dhinaca kale howlgalo ay maanta ka sameeyeen ciidamo ka tirsan kuwa Booliska DFKS qeeybo ka mid ah G/Banaadir ayaa waxaa ay kusoo qabqabteen tiro maandooriye yaal ahaa.
Afhayeenka ciidanka Booliska DFKS ayaa C/llaahi Xasan Bariise ayaa sheegay sheegay howlgalo ay maanta ka sameeyeen degmooyinka Xamar Weyne,X.jajab,iyo Boondheere ay kusoo qabqabteen Maandooriye yaal isugu jira Xashiishad,Qamri iyo Calaq.
ma ahan marki ugu horeeysay ee laga soo qabto maandooriye yaal degmooyinkaasi waxaana degmooyinkaasi ay ka mid yihiin meelaha ugu badan ee laga soo qabto dadka ka ganacsado maandooriyaasha.
Baydhabo: Guddoomiyaha golaha aqoonyahanada iyo siyaasiyiinta Digil iyo Mirifle oo ku baaqan in si shuruud la `aan ah loo joojiyo dagaalada Degmada Saakow ka soo cusboonaaday.
Baydhabo: Golahani aqoonyahanada iyo siyaasiyiinta beelaha Digil iyo Mirifle ayaa waxay baaq nabadeed u jeediyeen labo beelood oo dhawaan dagaaladooda ka soo cusboonaaday degamda Saakow ee gobolka Jubbada Dhexe.
Golahani waxay ka codsadeen labada beelood oo dirirtooda ka soconayso deegaano ka dhow dhow degmada Saakow inay joojitaan dagaalada, wixii khilaafaad ahna u dhaxeeyana ay ku dhameeyana wada hadal.
Guddoomiyaha golaha aqoonyahanada iyo siyaasiyiinta beelaha Digil iyo Mirifle Prof. Ibraahim Muuse Xeero oo saxaafadda kula hadlayay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa labadaasi beelood oo maalmahanba dagaal ku dhexmarayay ugu baaqan inay si shuruud la`aan ah u joojiyaan colaadaha iyagu u dhaxeeya.
Baaqani ka soo yeeray golaha aqoonyahanada iyo siyaasiyiinta beelaha Digil iyo Mirifle ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli deegaanada Labada beelood ku dagaalamayaan oo ka tirsan degmada Saakow lagu soo waramayo in ay ka socdaan hub aruursi iyo dhaq dhaqaaq ciidan oo labadaasi beelood ay wadadaan.
Dagaalkani oo dhawaan ka qarxay degmada Saakow ee gobolka Jubbada dhexe ayaa waxa uu yimid ka dib markii labo beelood oo walaalaha ay isku qabsadeen lahaanshaha dhul daaqsiin oo ku yaala agagaaraha degmada Saakow, walaw dagaaladaasina intii ay socdeen ay geesteen qasaaro isugu jira naf iyo Maal.
Luulyo 30, 2008
You are currently browsing the WEEJIDOW blog archives for Luulyo, 2008.